qalabka adeegsiga bogga
Qalabkayagu waa ka duwan yahay tarjumaadda tarjumaadda. Mawduucyada websaydhka waa la turjumi karaa. Laakiin URL-yada website-yada waxay ku qoran yihiin Ingiriis kuwaas oo aan lagu turjumi karin luqadaha kale. Qalabkeena luqadda wuxuu siinayaa xal caalami ah oo adduunka ah.
URL-yada website-yada waxay ku qoran yihiin Ingiriis.
Sidaa darteed, dadka aan Ingiriisiga ahayn, dadka reer miyiga ah iyo kuwa gobolkuba ma furi karaan boggaga internetka. Qalabkeena luqadda ayaa ah midka ugu fiican ee loogu talagalay iyaga. 1. Isticmaalayaasha luqadda ee gobolku waxay heli doonaan bogga internetka iyagoo caawimaya cidkasta oo keliya
2. Kadib markaa waxay internetka u furi karaan qalabkeena, gacmahooda
3. Waxay ku qori doonaan cinwaanka barbaarinta ppooii Ctrl + Enter ayaa furan ama ayiiuu.com iwm. (Wax walba oo 3 ah oo furan, oo xaq u leh bidix, laba jeer, kuwaas oo wadajir u ah kumbuyuutarka.)
4. Dowladaha iyo milkiilayaasha internetka waa inay ku dhajiyaan koodhadhkayaga boggaga internetka
Qalabkeena luqadda wuxuu u shaqeeyaa sidan soo socda ee bogagga shabakadaha.
1. Kareebin iyo dhejin koodhka --body-- tag ee boggaaga internetka oo aad ku dhajiso
2. Furo boggaaga internetka ee shabakadaada hal mar ka dib markaad dhajisid koodhka
3. Hadda ku qor cinwaanka bar ppooii.com ama (ooiiuu iyo Ctrl + Enter) iwm. Eeg sawirka kumbuyuutarka
Qalabkayagu wuxuu u shaqeeyaa sidii dadka loogu talagalay.
1. Hadda ku qor cinwaanka bar ppooii.com ama (ooiiuu iyo Ctrl + Enter) iwm. Eeg sawirka kumbuyuutarka
2. Furaha 3-aad, oo xaq u leh bidix, laba jeer, kuwaas oo ku wada jira kumbuyuutarka